'Kubadda Cagta ayaan ku Noolahay... Kanise waa Jaceylkii u horreeyay ee aan u Qaado': Paul Pogba, muxuu ka yiri Koobka Adduunka iyo Finalka Xulkiisa???
Monday, February 18th, 2019 - 18:57:23
Thursday July 12, 2018 - 10:26:17 in Wararka by Muuse Cabdi
Paul Pogba ayaa kasoo Ifay Koobka Dunida ee Sanadkan ka dhacaya Dalka Ruushka, kaasoo Xulkiisu ay soo Gaareen Final, wuxuu sheegayaa hadda in Jaceylkii ugu weynaa ee kubadda cagta uu hadda Dareemayo, France ayaa ah guuleystaha Final-ka sida uu qabo Pogba.
Wiilkan oo 25-jir ah ayaa wuxuu xiriir wanaagsan la leeyahay Taageerayaasha xulka Faransiiska, wuxuuna ka codsaday in ay Laba Jibbaaraan Taageeradooda, maaddaama maanta iyo Maalmihii hore ay kala soocanyihiin.
Weli, Laacibkan hoos u dhac kalama uusan kulmin ciyaaraha ka dhacaya dalka Russia xagaagan, bandhiggiisa fiican ayaana Aamusiyay kuwo aaminsanaa in uusan Waxqabad wanaagsan soo bandhigin laacibkan.
'Haddii aan Maqlo Ereyo Foolxun, ama aan Maqlo kuwo Qurux badan, waxaan isku deyi doonaa inaan u dagaallamo Guusha iyo Jaceylkeyga Koobka Dunida,' ayuu yiri.
Pogba ayaa sheegay in Kubadda Cagta uu ku noolyahay, isla markaana uu ku shaqeysto, ha yeeshee wuxuu markan sheegayaa in uu Jaceylkii ugu xoogganaa uguna horreeyay u qaaday Kubadda cagta, sababtana wuxuu ka dhigay inuu ku dhowyahay Hanashada Koobka Dunida ee ka dhacaya Ruushka.